Apple Mojito ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
1. MONIN Mojito Syrup - 15 ml
မိုနင်းတံဆိပ်Mojito အဆီ - ½ပတ်
2. MONIN Green Apple Syrup - 15 ml
မိုနင်းတံဆိပ် ပန်းသီးစိမ်း အဆီ - ½ ပတ်
သံပရာရည် - ½ ပတ်
4. Lime Wedges -4pcs
သံပရာသီးစိတ် - ၄ စိတ်
5. Mint Leaves - 8-10 leaves
ပူစီနံရွက် - ၈-၁၀ ရွက်
6. Green Apple - 4-6 slices
ပန်းသီး(အစိမ်းရောင်) - ၄-၆ အပြားလိုက် ခပ်ပါးပါးလှီးထည့်ရန်
7. Soda Water - Top up
ဆိုဒါရေ - အနည်းငယ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ဖန်ခွက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။
ထို့နောက် ရေခဲများကို အတုံးငယ်လေးများဖြစ်အောင် ခွဲထည့်ပါ။
(ရေခဲခြစ်သုံးလည်း ရပါတယ်)။ ထို့နောက်
ပူစီနံရွက်၊ ပန်းသီးစိတ်လေးများထည့်သွင်း အလှဆင်လိုက်ပါ။
Apple Mojito လေးကို ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။